Aasaaska tallaalka | Vaccine basics | Unite against COVID-19
Tallaalka COVID-19 | The COVID-19 vaccine
Aasaaska tallaalka | Vaccine basics
Tallaaka COVID-19 waa bilaash, waxana heli kara qof walba oo New Zealand degan oo jira 12 sano iyo ka weyn.
Booqo Book my vaccine, ama soo wac qadka caafaadka tallaalka COVID si aad u heshid balantaada.
Yaa la siinayaa tallaalka?
Tallaalka COVID-19 waa bilaash, khasab maaha oo loo heli karo qof walba ee New Zealand da’dooda ah 12 iyo ka badan.
Dhibaato malahan waxa fiisadaada ama heerka muwaadinnimadaada tahay. Ma isticmaaleyno wax macluumaad ah ee loo aruuriyay ujeedooyinka socdaalka.
Yaa heli karo tallaalka COVID-19?
Markii aad qaadatid tallaalka?
Waxaan ku bilaabeynaa tallaalka si tallaabooyin ah. Qof walba ee ku nool New Zealand da’da 12 iyo ka weyn waxay ku jiraan kooxaha 1 illaa 4.
Marka koowaad, waxaan ku illaalineynaa kuwa inta badan halis ugu jiro inuu ku dhaco COVID-19 goobtooda shaqada. Tani waxay yareyneysaa halista dilaaca mustaqbalka iyo bandowyada.
Marka xigta, waxaan tallaaleynaa dadka inta badan halista ugu jiro inay si daran u xanuunsadaan ama dhimanayo haddii uu ku dhaco fayraska.
Ugu dambeyntii, waxaan tallaaleynaa qof walba oo kale ee ku nool Aotearoa da’da 12 iyo ka weyn.
Tallaalka wuxuu u yahay bilaash qof walba, oo aan laga eegin fiisadaada ama heerka muwaadinnimada.
Haddii aad u baahantahay inaad u safartid dibada oo sababo naxariis ah ama sababaha muhiimada qaranka, waxaa kuu suurtogeli karto inaad codsatid tallaalka hore.
Sida loo codsado tallaalka hore
Tallaalka iyo shaqadaada
Tallaalkee ayaa lagu siinayaa
Tallaalka Pfizer ayaa ah tallaalka COVID-19 kaliya ee laga ansixiyay ku isticmaalka New Zealand. Waxaan haynaa 10 milyan oo garoojo – oo ku fillan 5 milyan oo qof inay helaan 2 garoojo ee ay ugu baahanyihiin inay isku illaaliyaan.
Tallaalka ayaa ku shaqeeyaa wax baritaanka difaacaaga jirka si uu aqoonsado oo u la dagaalamo fayraska.
waa fariin sidaha tallaalka RNA (mRNA)
kama koobna wax fayrasyada nool, ama dhintay ama dib loo nooleeyay
kuguma ridi karo COVID-19
ma saameyn karo DNA gaaga
kama koobna wax waxyaabaha xayawaanka ah.
Waxaad u baahaneysaa inaad qaadatid garoojadaada labaad ee tallaalka ugu yaraan 42 maalmood (6 isbuuc) kadib garoojadaada koowaad.
Ogow sida tallaalka u shaqeeyo
Ogow waxa laga filanayo markii aad qaadatid tallaalkaaga
Ogow waxa laga filanayo tallaalkaaga kadib
Ogow wax ku saabsan saameynaha caafimaadka ee tallaalka
Badqabka iyo waxtarka tallaalka
Maamulka badqabka daawooyinka New Zealand Medsafe ayaa qiimeyso isticmaalada dhammaan daawooyinka cusub. Tani waxaa ku jiro tallaalada.
Si markaas ay Medsafe ugu ansixiso isticmaalka gudaha New Zealand, waa inay ahaataa kalsooni ee inay:
buuxiso baaritaanada badqabka aan ku leenahay gudaha New Zealand
u hogaansanaataa heerarka caalamiga ah ee badqabka, wax tarka iyo tayada.
Tallaalka Pfizer aad ayuu wax ku ool u yahay haddii dadka qaataan labada garoojo. Markii aad si buuxdo u tallaalantahay waxaad si dheer ugu dhowdahay inaad si dhab ah u jiratid.
Daraasado ayaa muujiyay in qiyaastii boqolkiiba 95% dadka qaatay labada garoojo ee tallaalka, ay ka illaalsanyihiin inuu ku dhaco aastaamaha COVID-19.
Ogow sida tallaalka loo sameeyay oo loo ansixiyay
Maxay muhiim u tahay in la qaato tallaal
Markii aad is tallaashid, ma illaalineysid kaliya nafsadaada. Waxaad sidoo kale sameyneysaa qeybtaada oo lagu yareynayo halista u gudbinta COVID-19 qoyskaaga, saaxibada iyo bulshada.
Waxaad weli u baahantahay inaad raacdid dabeecadaha caafimaadka muhiimsan tallaalka kadib
Waa xili hore in la sheego haddii aad u gudbin kartid fayraska kadib markii si buuxdo laguu tallaalo.
Si aad uga caawisid illaalinta nafsadaada, qoyskaaga iyo dadka kale, waxaad u baahantahay inaad sii wadid ku caawinta looga hortagayo faafinta COVID-19 kadib markii lagu tallaalo. Xasuuso in aad:
Wada dhaqo gacmahaaga
Ku qufac iyo ku hindhis suxulkaaga
Xiro maaskaraha wajiga gaadiidka bulshada
Raadraac meesha aad ku maqneyd
Daar raadraaca Bluetooth ee app-ka Raadraaca NZ COVID
Guriga joog oo soo wac Qadka caafimaadka (0800 611 116) haddii aad jirantahay
Ka warbixinta macluumaadka qaldan ee tallaalka ama khiyaamooyinkaaga
Waxaa jiro macluumaad badan onleenka ah iyo warbaahinta bulshada ee ku saabsan tallaalka. Waxay noqon kartaa buux dhaaf oo way ku adagtahay in la ogaado waxa lagu tiirsan karo. Hubi inaad ka heleysid macluumaadka illo aamin ah oo aadan wadaagin wax walba illaa aad ka ogaatid inay run tahay.
Sida loo helo macluumaadka aamin ah ee ku saabsan tallaalada
Waxaan raadineynaa tallaalayaal dheeraad ah ee nagu taageero bixinta tallaalka.
Haddii aad tahay xirfadlaha caafimaadka shaqada ka fariistay ama aadan hadda ka shaqeyneynin shaqaalaha caafimaadka oo aad rabtid inaad iskaa wax u qabatid, booqo websaydka Wasaarada Caafimaadka si loo diiwaangeliyo xiisahaaga.
Iska diiwaangeli xiisahaaga ee inaad noqotid talaale (external link)